more ...Ramatoa ho an'ny fanodinana & fitantanana
Fandavana sy fanaingoana
Mitatitra atiny tsy ara-dalàna ao amin'ny forum: abuse@schagerer.com
Azafady zahao ny teny nindramina ary omeo rariny izy ireo amin'ny fomba laika mifanaraka amin'ny ÖStGB §.
1. Andraikitra amin'ny atiny amin'ity tranokala ity
Izahay dia mamolavola hatrany ny atiny amin'ity tranokala ity ary miezaka manome vaovao marina sy ilaina havaozina. Mampalahelo fa tsy afaka mitana andraikitra amin'ny fanitsiana ny votoatiny rehetra amin'ity tranokala ity izahay, indrindra ho an'ireo omen'ny antoko fahatelo. Raha ny votoatin'ny forum voatahiry sy ireo pejy voatahiry voatahiry, ny tompon'orinasa manokana fa tsy ny tompon'andraikitra no tompon'andraikitra, izany dia manome sehatra ara-teknika misy ihany ary tompon'andraikitra araka ny §16 ECG ho mpamatsy fampiantranoana fa tsy ho an'ny mpikambana sy ny asany. Raha mahatsikaritra misy atiny manana olana na tsy ara-dalàna ianao, azafady mba antserasera aminay haingana dia hahita ny antsipiriany momba ny fifandraisana ianao ao anaty taratasy.
2. Adidy amin'ny rohy ao amin'ity tranokala ity
Ny tranokalanay dia misy rohy mankany amin'ny tranokala hafa izay ny votoatinay tsy tompon'andraikitra amin'izany. Ny fahazoan-dàlana amin'ny tranokala misy mifandraika dia tsy misy aminay araka ny § 17 ECG, satria tsy nanana fahalalana momba ny hetsika tsy ara-dalàna izahay ary tsy nahatsikaritra ny tsy fanarahan-dalàna tahaka izany ary hanaisotra rohy eo noho eo isika raha mahatsikaritra izay tsy manara-dalàna. Raha tsikaritrareo ny rohy tsy ara-dalàna ao amin'ny tranokalanay, azafady mba hifandraisa aminay, ahitanao ny antsipiriany hifandraisana ao anaty soratra.
3. Ny fitahirizana angon-drakitra
Rehefa mitsidika tranonkala ianao anio, ny fampahalalana sasany dia noforonina sy voatahiry ho azy, ao anatin'ity tranonkala ity. Raha mitsidika ny tranokalanay toa izao ianao, ny tranonkala web (solosaina voatokana ity tranonkala ity) dia mitahiry mandeha ho azy ny fivahotana toy ny adiresy (URL) ao amin'ilay tranokala tadiavinao, ny browser sy ny dikan-browser, ny rafi-pandaminana nampiasaina, ny adiresy (URL) efa notsidihina teo aloha. Pejy (URL Referrer), ny anaran'ny mpampiantrano sy ny adiresy IP an'ny fitaovana izay hidirana azy io, ary ny daty sy fotoana eo amin'ny rakitra (rakitra takelaka misy mpizara. Toy ny fitsipika, ny rakitra logiciel web fitehirizana mandritra ny roa herinandro ary avy eo dia voafafa avy hatrany. Tsy ampahafantarinay izany fampahalalana izany, fa tsy azontsika atao ny manohitra fa ho hita eo izany raha tsy ara-dalàna ny hetsika. Ny fototry ny ara-dalàna, araka ny Andininy faha-6 andalana 1 f DSGVO (fanodinana ara-dalàna), dia ny fisian'ny tombotsoa ara-dalàna amin'ny fampandehanana ny fandefasana ny tsy fanarahan-dalàna amin'ity tranokala ity amin'ny alàlan'ny fisie ny rakitra web server log.
4. Ny fitahirizana angon-drakitra manokana
Ny angon-drakitra manokana izay alefanao elektronika aminay eto amin'ity tranokala ity, toy ny anarana, adiresy imailaka, adiresy na fampahalalana manokana momba ny tena manokana amin'ny toe-javatra fandefasana endrika na fanehoan-kevitra, dia hozarainay miaraka amin'ny fotoana sy ny adiresy IP ampiasaina amin'ny tanjona voafaritra, notehirizina tsara ary tsy ampahafantarina amin'ny ankolafy fahatelo. Izahay ihany no mampiasa ny angon-drakinao manokana ho an'ny fifandraisana amin'ireo mpitsidika izay mangataka amin'ny fifandraisana sy ny fanodinana ireo serivisy sy vokatra atolotra amin'ity tranokala ity. Izahay dia tsy hampahafantatra ny mombamomba anao raha tsy ekenay, fa tsy afaka manohitra izahay fa ho hita eo izany raha tsy ara-dalàna ny hetsika. Raha mandefa mailaka momba anao amin'ny alàlan'ny mailaka, tsy lavitra ity tranokala ity izahay, tsy afaka manome antoka ny fifindrana sy ny fiarovana ny angon-drakinao ianao. Manoro hevitra izahay mba tsy handefa fampahalalana tsiambaratelo amin'ny alàlan'ny mailaka. Ny fototry ny ara-dalàna eo ambanin'ny Andininy 6 (1a) ao amin'ny GDPR (fanodinana ara-dalàna) dia ny hanomezanao anay ny fankatoavana ny angon-drindrinao. Azonao atao ny mamerina io fanekena io amin'ny fotoana rehetra, ampy ny mailaka tsy ara-potoana, ahitanao ny antsipirihany momba ny fifandraisanay amin'ny taratasy.
5. Zo araka ny lalàna mifehy ny fiarovana ny data
Araka ny voalazan'ny GDPR sy ny lalàna miaro ny data Data Australiana (DSG), manana ny zo manaraka ireto izy ireo: zo hanitsy (Andininy 16 GDPR), mety ho voafafa (Andininy 17 GDPR), zon'ny famerana ny fanodinana (Andininy) 18 DSGVO), zahana amin'ny fampandrenesana, adidy fampahafantarana mifandraika amin'ny fanitsiana na fanesorana ny data manokana na famerana ny fanodinana (Andininy 19 GDPR), havanana amin'ny fahalalahan'ny data (Andininy 20 GDPR), zon'ny fanoherana (Andininy faha-21 GDPR), marina, tsy an-kanavaka. iharan'ny fanapahana mifototra amin'ny fanodinana automatique, ao anatin'izany ny fanaovana profiling, (Andininy 22 GDPR). Raha mino ianao fa manitsakitsaka ny lalànan'ny fiarovana ny angon-drakitra na ny fanovana ny angon-drakitra nataonao tamin'ny fomba hafa, dia afaka mitaraina amin'ny manam-pahefana mpanara-maso ianao, izay any Aotrisy no fahefan'ny fiarovana fiarovana.
Mampiasa mofomamy HTTP ny tranonkalantsika hitahiry ireo angon-drakitra voafaritra an'ny mpampiasa. Ny cookie iray dia fonosana fohy iray izay ovaina eo anelanelan'ny tranonkala sy ny mpizara web, saingy tsy misy dikany aminy izany ary ampiasaina ho an'ny fampiharana an-tranonkala ihany, toy ny fampiharana an-tranonkala. Amin'ny maha forum, misy dikany, ohatra, amin'ny fitahirizana vonjimaika ny angon-dresaky ny fivoriana ho an'ny kaonty mpampiasa izay nidiranao tao amin'ny forum. Misy karazany roa ny mofomamy: ny mofomamy an'ny antoko voalohany dia namboarin'ilay tranonkalantsika, ary ny mofomamy fahatelo dia noforonina tranonkala hafa (ohatra: Cloudflare). Ny fanavahana azy ihany koa dia misy eo amin'ireo sokajy mofomamy telo, ity fanavahana ity izay mifototra amin'ny filàna fampiasana: mofomamy tena ilaina mba hiantohana ny fiasa mahazatra amin'ny tranokala, mofomamy mivaingana mba hiantohana ny fampiasa tranonkala sy ny mofomamy kendrena hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa. Ny mofomamy nataontsika voalohany dia ilaina amin'ny lafiny ara-teknika mba hiantohana ny fiasan'ny serivisy ary tsy misy angon-drakitra manokana toa ny adiresy IP na ny adiresy mailakao. Noho izany dia latsaka ny alàlan'ny lalàna misahana ny fifandraisan-davitra (964) momba ny fifandraisan-davitra (TKG), satria tsy mety intsony ny serivisy ho an'ny mpampiasa rehetra rehefa tsy misy cookies ny cookies. Ny fanekena amin'ny dikan'ny TKG dia tsy ilaina izany. Ny voafaritra manokana dia ireto ny mofomamy voalohany ireto: * _data, * _t, * _sid ary safidio xt_ddos_key, xt_fboff ary xt_banman ho toy ny mofomamy fivoriana ho an'ny takelaka fidirana sy ny fotoam-pivoriana, xt_cdn, xt_dir ary xt_rewrites mba hamerina anao hampiditra amin'ny alàlan'ny Cloudflare ary koa ny xt_cookiecheck hampahafantatra anao amin'ny alàlan'ny takelaka fidirana, raha toa ianao ka tsy nahavita cookies tamin'ny làlanao. Ny mofomamy fahatelo an'ny __cfduid dia mofomamy ilaina amin'ny teknolojia avy amin'ny Cloudflare. Izahay dia mampiasa ny serivisy Cloudflare hiarovana ny serivisintsika amin'ny fanafihana DDoS, raha tsy izany dia tsy azo antoka ny fisian'izy ireo. Mijanona eo amin'ny fitaovanao hatrany ny fahandroana mandra-pahatongan'ny vanim-potoan'izy ireo na mandra-pahafahana azy ireo, izay mety hitranga arakaraka ny toerana misy ny mpanamory rehefa manidy ny findainao. Raha amin'ny ankapobeny dia tsy avelanay mampiasa cookies, i. tsy azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fikandrana browser, misy fiasa sy pejy sasany tsy mety miasa toy ny andrasana.
7. Ny fampiharana Fepetra fampiasana